Cudurka korona: Burcadda Internet-ka oo dooneysa inay xaddo sirta tallaalka fayraska – Radio Damal
Cudurka korona: Burcadda Internet-ka oo dooneysa inay xaddo sirta tallaalka fayraska
Mareykanka wuxuu arkey jawaasiis ajaaniib ah oo qaaday weeraro qarsoon oo ay ku raadinayaan macluumaadka dawada loo sameynayo fayraska corona, sida uu BBC u sheegay sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka Mareykanka.
Bill Evanina, oo ah agaasimaha Laanta Ka hortagga weerarrada sirdoon iyo Xarunta Dhexe ee Amniga, wuxuu sheegay in dowladda Mareykanka ay cilmi-baarayaasha caafimaad uga digeyso halista jirta.
Balse ma uusan xaqiijin in ay jiraan weeraro dhanka internet-ka ah oo xog lagu xaday.
Laamaha amniga ee UK waxay sheegeen dhacdo iyo dhaqdhaqaaqyo kaas la mid ah ay arkeen.
Tartan caalami ah oo lagu raadinayo tallaalka fayraska Covid-19 ayaa daafaha caalamka ka socdo.
Cilmi-baarayaal caafimaad, shirkado iyo dowlado ayaa ku lug leh arrintaas. Dadaalkoodana waxaa si joogto ah u ilaalinaya sirdoonnada dalalka ay ka howlgalayaan, iyadoo haddana ay weerarro la kulmayaan.
Hay’adda Mr Evanina waxay bixisaa talada la xiriirta sida looga hortagayo weerarada ajaaniibta ee dhanka internet-ka. Waxay la talisaa dowladda Mareykanka, ganacsatada iyo jaamacadaha.
“Waxaan la shaqeyneynay shirkadeheena iyo dowladda si loo xaqiijiyo difaaca dhammaan baaritaannadeena iyo xogta aan haysano,” ayuu yiri.
“Waxaan eegeynaa xaalad kasta oo sirdoon caalami ah la xiriirta, waxaa ka mid ah Shiinaha oo isku deyi doono inuu helo xogta la xiriirta waxa aan halkan ku sameyneyno.”
Dowladda Mareykanka waxay isku deyeysaa in ay gacan ka geysato shaqada tallaalka iyadoo adeegsaneysa barnaamij Xawaare kulul ah oo dedejin ah.
Dal kasta oo ku hormara sameynta dawada wuxuu marka hore uga faa’ideyn doonaa shacabkiisa ka hor intuusan dunida la wadaagin.
“Waxaan xiriir la sameyneynay shirkad kasta oo dawo sameysa oo haddana baaritaan wadda, waxaana u sheegeynay in ay si wayn u taxadaraan,” ayuu hadalka ku daray Mr Evanina.
“Dunida maanta, ma jiro wax ka qiimo badan in la xado nooc kasta oo cilmi-baaris dawo ah oo la doonayo in lagu daweeyo coronavirus.”
Bartamihii April, Sarkaal FBI ah wuxuu sheegay in ay jiraan”burcad” ku dhex dhuumatay macaahidda sameynaya wax la xiriira Covid.
Bishii lasoo dhaafay, ku xigeerka xeer ilaaliyaha Mareykanka, John Demers, wuxuu sheegay in “mucjiso iyo la yaab” ay noqoneyso in lagu fakaro in Shiinaha uusan raadineynnmacluumaad dheeraad ah oo badan.
Xarunta Amniga internet-ka ee Canada ayaa bishii Maarso ka digtay “weeraro aad u culus oo ay qaadaan burcad qatar ah kuwaas oo isku deyaya in ay xadaan hantida aqooneed ee hay’adaha ku lugta leh baaritaannada la xiriira Covid-19.”
Sidoo kale, sirdoonnada Mareykanka iyo dalalka kale ee reer Galbeedka waxay u badan tahay in ay daneynayaan in ay ogaadaan waxa ka socda gudaha Shiinaha, sida inay oagaadaan tirada dhabta ah ee dhimashada Coronavirus uu sababay iyo daweynta iyo tallaalka ay sameynayaan.
Waxaa jiray walaac la xiriira halista dhanka internet-ka ee ay wajahayaan xarumaha caafimaadka, taas oo sababi karta in ay wiiqanto awoodooda ay uga hortagayaan cudurada dilaacaya.
Laba isbitaal oo ku yaalla dalka Jamhuuriyadda Czech, waxay soo sheegeen in bishii April ay la kulmeen weerarro dhanka online-ka ah. Taas waxay dhalisay dalab aan caadi ahayn oo ka yimid Laanta sirta ee Mareykanka.